Sorona Masina ny 20/05/2018 - Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 20/05/2018
MPANKAHERY SY MPANAZAVA ARY MPAMPIHAVANA, NY FANAHY MASINA
Fahen. 1, 7
Manerana an’izao tontolo izao ny Fanahin’ny Tompo; ao aminy avokoa ny zavatra rehetra, ary hainy daholo ny karazam-pitenenana. Aleloia!
Andriamanitra ô, ny fankalazana an’izao andro izao no anamasinanao ny Eglizinao manontolo manerana ny foko sy ny firenena rehetra; koa mihanta aminao izahay: mba rotsahy ny fanomezan’ny Fanahy Masina ny lafivalon’ny tany; ary efa niharihary ny hatsaram-ponao tamin’ny nanombohana nitory ny Evanjely, ka mba tohizo ankehitriny hanenika ny fonay mpino.
Asa 2, 11
Samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra ary nanomboka niteny.
Nony tonga ny andro Pantekôty, dia tafavory tao amin’ny trano anankiray ny Apôstôly rehetra, ary tampoka injay nisy feo avy any an-danitra toy ny rivotra nifofofofo mafy ka nahenika ny trano nitoerany: sady nisy lela maro mitarehina afo niseho taminy sy nizarazara nipetraka teo amboniny tsirairay avy, ka samy feno ny Fanahy Masina izy rehetra sy niteny tamin’ny fiteny maro samihafa, araka ny nampitenenan’ny Fanahy Masina azy avy.
Ary nisy Jody mpivavaka tsara nitoetra tao Jerosalema, avy tamin’ny firenena rehetra ambanin’ny lanitra, nony nahare izany izy ireo, dia nidodododo maro be ka very hevitra izay tsy izy, fa samy nandre azy ireo niteny ny fiteniny avy izy rehetra. Gaga sy talanjona izy ireo, ka vaky nanao hoe: “Endre, tsy avy any Galilea daholo va ireo miteny ireo? Ka nahoana àry ity isika no samy mandre azy miteny ny fitenin-drazantsika avy; dia ny Parta, ny Meda, ny Elamita sy ny mponina any Mezôpôtamia, Jodea, Kapadôsa, Pônto, Azia, Frijia, Panfilia, Ejipta, ary ny any Libia akaikin’ny Sirena, sy ny vahiny avy any Rôma, na Jody na prôzelita, ary ny any Kreta sy ny Arabo, dia ahoana no samy mandre azy ireo milaza amin’ny fitenintsika avy ny zava-mahagaga ataon’Andriamanitra isika rehetra.
Sal. 103, 1ab sy 24ad. 29bd-30. 31 sy 34
Fiv : Alefanao ny fofon’ainao, ry Tompo, ka mihavao ny endriky ny tany.
Isaory ny Tompo, ry fanahiko lehibe indrindra Ianao, ry Andriamanitro; fiandrianana sy voninahitra no itafianao. Maro tokoa ny asanao, ry Tompo sady vita amim-pahakingana. Ny tany henika ny harenao.
Ny fofon’ainy alanao: mody mandry izy; ny fofon’ainao alefanao: àry izy, ka indro mihavao ny endriky ny tany. Mandrakizay ny voninahitry ny Tompo. Hifaly amin’ny asany anie ny Tompo! Ho tonga anatrehany anie ny vetsoko: ny Tompo, ny ahy, no fifaliako.
Taratasy voalohan’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôrinty
1 Kôr. 12, 3b-7. 12-13
Fanahy iray ihany no nanaovana Batemy antsika rehetra mba ho vatana iray ihany isika.
Ry kristianina havana, tsy misy afa-milaza hoe: “i Jesoa no Tompo”, raha tsy amin’ny Fanahy Masina. Maro samihafa ny fanomezana, nefa iray ihany ny Fanahy; maro samihafa ny fanompoana, nefa ny Tompo iray ihany, ary maro samihafa ny asa, nefa iray ihany Andriamanitra izay manao ny zavatra rehetra amin’ny olona rehetra. Samy omena ny fanomezana maneho ny Fanahy izy tsirairay avy, mba hahasoa ny be sy ny maro. Fa toy ny maha-iray ny vatana, na dia maro rantsana aza, sy toy ny maha-vatana iray ny rantsam-batana, na dia maro aza izy, dia toy izany koa i Kristy. Fa Fanahy iray ihany no nanaovana Batemy antsika rehetra, mba ho vatana iray ihany isika na Jody na Jentily, na mpanompo na tsy mpanompo; ary Fanahy iray ihany no nampisotroana antsika rehetra.
Antsa amin’ny Fanahy Masina
Fiv: Avia, ry Fanahy Masina ô, arotsahy re avy any an-danitra ny tsirim-pahazavanao.
1. Avia re, ry Rain’ny malahelo,
Avia re, Mpisolo vava anay.
2. Avia, ry Mpanafaka alahelo,
Fa maminay e ny honenanao.
Avia re, Mpamelombelona ô.
3. Fiadananay raha sendra ka mijaly,
Fialofanay raha sendra maina andro,
Avia re, Mpanampitamby ô.
4. Fenoy ny tsirim-pahazavanao
Ny fon’izay rehetra mino Anao:
Avia re, ry hasambaranay.
5. Zahay anie raha sendra ilaozanao
Dia zava-poana feno fahotana,
Avia re, ry Mpankahery anay.
6. Diovy re ny fo izay feno ota,
Ka tsofy rano tsy ho karankaina,
Avia re, sitrano ny fonay.
7. Lefaho re ny olona maditra,
Ny matimaty ovao ho maimay,
Avia re, Mpanitsy dia anay.
8. Ireny fanomezanao fito
Omeo anay vahoaka mino Anao,
Avia re, matoky Anao izahay.
9. Omeo anay ny hatsaram-panahy,
Ny famonjena nony miala ety,
Omeo anay ny hasambaranao.
Avia, ry Fanahy Masina, fenoy Anao ny fonay mpino; ary ampireheto ao am-ponay ny afon’ny fitiavanao.
Tahaka ny nanirahan’ny Raiko Ahy no anirahako anareo koa: Raiso ny Fanahy Masina.
Ny harivan’ny Paka ilay andro voalohan’ny herinandro, raha nirindrina ny varavaran’ny trano nivorian’ny mpianatra noho ny fahatahorany ny Jody, dia tonga i Jesoa ka nitsangana teo afovoany sy nilaza tamin’izy ireo hoe: “Homba anareo anie ny fiadanana!” Nony efa nilaza izany Izy, dia nasehony azy ireo ny tanany sy ny tratrany, ka faly ny mpianatra fa nahita ny Tompo. Dia hoy indray Izy tamin’izy ireo: “Homba anareo anie ny fiadanana! Tahaka ny nanirahan’ny Raiko Ahy no anirahako anareo koa”. Rehefa nilaza izany Izy dia nitsoka ka nanao tamin’izy ireo hoe: “Raiso ny Fanahy Masina, ny fahotana izay havelanareo dia ho voavela ary izay hotananareo dia ho voatana”.
Ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanam-po.
Ry kristianina havana, izao no lazaiko: mandehana ara-panahy, dia tsy hanatanteraka ny filàn’ny nofo ianareo. Fa ny nofo manam-pilàna mifanohitra amin’ny an’ny fanahy, ary ny fanahy manana ny azy mifanohitra amin’ny an’ny nofo: koa mifanohitra izy roroa, hany ka tsy mahefa izay tianareo ianareo. Raha tarihin’ny fanahy anefa ianareo, dia tsy mba ambanin’ny Lalàna intsony. Ary miharihary ny asan’ny nofo: dia fijangajangana, fahalotoana, fijejojejoana, fanompoan-tsampy, fanaovana ody mahery, fifankahalana, fifandirana, fialonana, fahatezerana, ady lahy, fifampiandaniana, fitokoana, fitsiriritana, famonoana olona, fimamoana, filerana, sy ny zavatra toy izany. Ary lazaiko anareo rahateo, araka ny efa nolazaiko fahiny koa, fa izay manao izany dia tsy mba handova ny Fanjakan’Andriamanitra.
Ny vokatry ny Fanahy kosa dia izao: fitiavana, fifaliana, fiadanam-po, fahari-po, hamoram-panahy, hazavam-po, tsy fivadihana, fahalemem-panahy, fahalalana onony; tsy misy izay lalàna mikasika an’ireo. Izay an’i Kristy Jesoa dia efa namàntsika ny nofony mbamin’ny faniriana amam-pilàndratsiny tamin’ny Hazofijaliana. Velona amin’ny Fanahy isika, ka aoka handeha amin’ny Fanahy; fa aza te hoderaina foana amin’izay fifampilàna kisa amam-pifampialonana.
Avia, ry Fanahy Masina, fenoy Anao ny fonay mpino, ary ampireheto ao am-ponay ny afon’ny fitiavana.
Jo. 15, 26-27; 16, 12-15
Ny Fanahy Fahamarinana no hitari-dalana anareo amin’ny marina rehetra,
Tamin’izany andro izany i Jesoa nilaza tamin’ny mpianany hoe: “Rehefa tonga ny Mpanafaka alahelo, Izay hirahiko aminareo avy amin’ny Ray, dia Izy no hanambara Ahy. Ary ianareo koa hanambara, satria teo amiko hatramin’ny voalohany ianareo... Mbola manan-javatra betsaka holazaina aminareo Aho, nefa tsy zakanareo ankehitriny; fa rehefa tonga ny Fanahy fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo amin’ny marina rehetra, satria tsy hiteny ho Azy Izy, fa izay rehetra ho reny no holazainy, ary ny zavatra ho avy no hambarany aminareo. Hanome voninahitra Ahy Izy, satria handray ny avy amiko, ka hanambara izany aminareo. Ahy izay rehetra ananan’ny Raiko; ka izany no nanaovako hoe: Handray ny avy amiko Izy, ka hanambara izany aminareo. Rehefa afaka kelikely dia tsy hahita Ahy intsony ianareo; ary rehefa afaka kelikely indray dia hahita Ahy ianareo, satria mankany amin’ny Ray Aho.
Rôm 6, 6-17
Izay rehetra tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra dia zanak’Andriamanitra.
Ry kristianina havana, izay ao amin’ny nofo dia tsy mety ho sitrak’Andriamanitra. Fa ianareo dia tsy ao amin’ny nofo, fa ao amin’ny Fanahy, raha mitoetra ao anatinareo koa ny Fanahin’Andriamanitra. Raha misy tsy manana ny Fanahin’i Kristy, dia tsy Azy izy; fa raha ao anatinareo i Kristy, na dia maty aza ny vatana noho ny fahotana, dia miaina kosa ny fanahy noho ny fahamarinana. Ary raha ny Fanahin’Ilay nanangana an’i Jesoa avy any amin’ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia Ilay nanangana an’i Kristy Jesoa koa, no hamelona ny vatanareo mety maty, noho ny Fanahiny izay mitoetra ao anatinareo.
Koa amin’izany, ry kristianina havana, tsy mpitrosa amin’ny nofo isika, ka ho velona ara-nofo. Satria raha velona ara-nofo ianareo, dia ho faty; fa raha vonoinareo amin’ny Fanahy ny asan’ny nofo, dia ho velona ianareo; satria izay rehetra tarihin’ny Fanahin’Andriamanitra dia zanak’Andriamanitra. Ary izany tokoa, satria tsy fanahim-panandevozana no noraisinareo, ka hatahotra indray ianareo, fa Fanahim-pananganan-janaka, ka iantsoantsika hoe: Aba! Ray! Ary ny Tenan’io Fanahy io ihany no vavolombelona miaraka amin’ny fanahintsika fa zanak’Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy, raha miara-mijaly aminy isika, mba hiara-komem-boninahitra aminy koa.
Avia, ry Fanahy Masina, fenoy Anao ny fonay mpino, ary ampireheto ao am-ponay ny afon’ny fitiavanao.
Evanjely masina nosoratani Md. Joany
Jo. 14, 15-16. 23b-26
Ny Fanahy Masina no hampianatra anareo ny zavatra rehetra.
Tamin’izany andro izany i Jesoa nilaza tamin’ny mpianany hoe: “Raha tia Ahy ianareo dia hitandrina ny didiko. Ary Izaho kosa hangataka amin’ny Ray, ka homeny Mpanafaka alahelo hafa ianareo, mba hitoetra ao aminareo mandrakizay. Raha misy tia Ahy, dia hitandrina ny teniko izy, ka ho tian’ny Raiko, ary hankao aminy Izahay ka honina ao aminy. Fa izay tsy tia Ahy kosa, dia tsy mba mitandrina ny teniko; ary ny teny izay renareo dia tsy Ahy, fa an’ny Ray Izay naniraka Ahy. Voalazako taminareo izany, raha mbola mitoetra eto aminareo Aho. Fa ny Mpanafaka alahelo, dia ny Fanahy Masina, Izay hirahin’ny Ray amin’ny Anarako, no hampianatra anareo ny zavatra rehetra, sy hampahatsiaro anareo ny zavatra rehetra nolazaiko taminareo.
Ry kristianina havana, mila Pantekôty vaovao lalandava izao tontolo izao, hanavaozan’ny Fanahin’Andriamanitra azy; koa mivavaha isika hangataka izay rehetra ilain’ny Eglizy, ary hiangavy an’Andriamanitra mba hamory ny zanany rehetra ao aminy.
Valy: Ampidino ao aminay ny Fanahinao, ry Tompo ô.
* Pantekôty no nanombohan’ny Eglizy, koa mangataha mba hahazo hery vaovao hatrany izy, isaky ny Pantekôty toy izao, hiasan’ny Fanahy Masina.
* Mizarazara ny firenena eto an-tany ary samy hafa fiteny; koa mangataha ho an’ireo solontenam-pirenena mivory matetika, mba hifankahazo izy sy hampanjaka ny fandriam-pahalemana.
* Maro ny mitady ny marina ary manampò fa hahita azy ivelan’ny Eglizy; koa mangataha amin’Andriamanitra mba hahay handray olona sy hamirapiratra hahatarika azy ny Eglizy.
* Sombin’ny Eglizy eran’izao tontolo izao ny fiangonantsika, koa angataho mba hitombo sy hiseho ny fitiavantsika mba hiroboroboan’ny finoana.
Andriamanitra ô, nomenao afo avy amin’ny Fanahy Masina ny Apôstôly ary nomenao hery hitory ny Evanjely eo amin’izao tontolo izao; koa mba andreheto fitiavana izahay rehetra zanakao amin’izao andro izao, hitarika ny olona hahalala Anao sy ho tia Anao.
Mihanta aminao izahay, ry Tompo, enga anie ny Fanahy Masina hampiharihary aminay, araka ny nampanantenain’ny Zanakao, ny harena masina miafina amin’izao Sorona izao ary hanoro anay ny fahamarinana rehetra.
Fa notanterahinao ny misterin’ny Paka nanangananao ny olombelona ho zanakao hiombona anjara amin’ny Zanakao Lahy tokana ary hanomezanao ny Fanahy Masina amin’izao andro izao. Satria Izy tany am-piandohan’ny Eglizy no nanambara Anao Andriamanitra tamin’ny firenena rehetra no sady hampiray ny fiteny samihafa hiara-mankatò ny finoana tokana.
Ka noho izao hafaliana lehibe amin’ny Paka izao dia mientan-karavoana ny tany tontolo; ary ny Hery any ambony sy ny Anjely dia mihira sy mankalaza ny voninahitrao tsy mitsahatra manao hoe: Masina, Masina, Masina...
Asa 2, 1-11
Samy feno ny Fanahy Masina avokoa ny mpianatra rehetra ary dia nankalaza ny asa mahagaga vitan’Andriamanitra. Aleloia!
Andriamanitra ô, notoloranao ny fanomezanao avy any an-danitra ny Eglizinao, koa ampio izahay hahatahiry ny fahasoavana nomenao hahavelona mandrakariva ao aminay ny fanomezan’ny Fanahy Masina, ary ny Kômonio raisinay anie, hanampy anay hahazo ny famonjena mandrakizay.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0971 s.] - Aidé par Evanjelyanio.org